Wasiir Axmad Cawad oo sharaftii iyo karaamadii Wasaaradda dhulka ku jiiday. (Warbixin) - Muqdisho Online
Home Wararka Wasiir Axmad Cawad oo sharaftii iyo karaamadii Wasaaradda dhulka ku jiiday. (Warbixin)
Wasiir Axmad Cawad oo sharaftii iyo karaamadii Wasaaradda dhulka ku jiiday. (Warbixin)
Wasiirka Arimaha Dibadda ee Soomaaliya oo la magacaabay mudo ka yar sanad ayaa waxa uu u muuqdaa mid lumiyay karaamadii iyo sharafkii Wasaaradda loo hayay. Shaqaalaha Wasarada iyo Safiirada Soomaaliya u fadhiya wadamada dibadda ayaa ku tilmaamay Axmad Ciise Cawad in uu yahay Wasiirkii ugu liitay ee wasaaradda soo maray.
Mid ka mida mas’uulitiinta Wasaaradda oo la hadlay MOL, kana gaabsaday in aan magaciisa sheegno ayaa sheegay in Axmad Cawad lagu qaldamay oo uusan ahayn qof matali kara sharafta iyo karaamada umadda Soomaaliyeed. Wax uu yiri “ma aha mid talo keena, talo qaato, faham ka heysta sida ay u shaqeeyso diblomaasiyada caalamka iyo tan gobolka hadana waa qof isla qob wayn oo aan wax loo sheegi karin”. waxa uu intaas uu ku daray “Wasaaradan waa wasaarad nasiib xun markastaa oo ay talaabo horay u qaadi lahayd midba mid ka xun ayuu loo soo magacaabaa, lakiin AxmadCiise Cawad waa kii ugu liitay ee na soo maray”.
Qodobada Wasiirka lagu eedeynayo ayaa waxaa ka mida;
Shaqadii Wasaaraada u xilsaarneyd oo uu la wareegay Wasiirka Qorsheynta Qaranka oonoqday mid isku haya mas’uuliyadii labada wasaaradood.
Ma aha mid wax aqriya ama qora oo xataa aan awoodin in labo eray isku toosiyo, gaar ahaan marka dowlada Soomaaliya ay heshiisyo galeyso
Ma laha hal abuur uu ku iibinayo sharafta iyo siyaasadda dowlada uu matalo, mararka qaar waxa uusan garanaynin waxa uu iibin lahaa.
Ma ku dhaqmo baratakool wasaaradeed iyo mid shaqsiba. Marka la joogo shirarka waxa uu lumiyaa awoodii uu isku xadidi lahaa ama uu ku xakamayn lahaa hadalkiisa. Halkii loogu talagalay in uu hadlo 3 daqiiqo ayuu hadlayaa labo saac markaas ayaa caalamku waxa ay gaaray in shirka uu isaga ka halayo laga kala cararo oo aanba la imaanin
Wax war ah uu u hayo wasaarada iyo shaqaalaheeda, maba yimaado wasaaradda, hadii aad maanta weydiiso imisa qof ayaa xafiiskiisa ka shaqeeyso kuuma uu sheegi karo.
Shirkii uu ku arko naag labisay ha noqoto wasiirada, safiir ama madaxweyne dal kale afka ayuu la galayaa isaga oo aan waligiis arkin ama aan xiriir la lahaynin.
Xeendaabka IGAD oo sanadkii kulma sodomeeye mar waxa ay ula baxeen Axmad Cawada naaneesta la yiraahdo “Mr. Wonderful” taas oo macnaheedu yahay shirkastaa oo uu ka qayb-galo waxa uu waqti kulumiyaa in uu amaano qofkastaa oo shirka fadhiya ama madaxda dalalka ay wakiilka ka yihiin halkii uu diiradda saari-lahaa in uu ka hadlo danaha Soomaaliya.
Waxaa wax lala yaabo ah in Madaxweyne Farmaajo uu shaqsi noocaas ah uu u magacaabo Wasaarad muhiimad intaa la eg u leh Umaadda Soomaaliyeed. Inta uu shaqsi noocaas ah hogaamiyo wasaaradii ahayd wajiga kaliya ee caalamka ka daawado Soomaaliya, waxaan shaki ku jirin in siyaasadda Madaxweyne Farmaajo ee Arimaha Dibadda ku dhamaan doonto fashil.
Previous articleBeesha Jiido oo sheegtay in ay ka Baxeeyso Maamulka K/galbeed (VIDEO)
Next articleBeesha M. Saleemaan oo lagu eedeeyay in ay isku darsatay Jagadii MW, Wasiiradii iyo hogaanka ciidanka Puntland